Indlu yangaphakathi yamaprothifolidi yakha izindlu zanamuhla - Izakhiwo zangaphakathi zokudweba zaseBucharest - I-Nobili Ingaphakathi, i-studio, isakhiwo, umklami, izinkampani, ukuklama, amanani
Interior design ukuthi sifinyelele kokubili izindlu, Villas kanye zokuhlala, njalo ngezifiso zibonisa izindlela zokuphila kwabo, izintandokazi zomndeni ngamunye. Ukuhlela kanye nokwenza isikhala ephilayo kuyingxenye uqalisa ingaphakathi design embili phrojekthi. Sinikeza izixazululo futhi iziphakamiso 3 D babefinyelela izinga eliphakeme, izinto kanye nemikhiqizo eliphezulu kakhulu. Projects kusuka kuphothifoliyo yethu design ingaphakathi emakhaya, Villas ukunethezeka eyenziwe isitayela zakudala nge yesimanje ingaphakathi amasevisi design turnkey e Constanta, Bucharest, Ploiesti, Brasov, Galati.
Ikhasi le-1 ku-7
Imiklamo yePortfolio ingaphakathi lokuklama izindlu zamanje zanamuhla
firma Nobili Design Interior isiqalile ukuklama imibono yangaphakathi yokwakha yangaphakathi yemvelo yezindlu zokunethezeka nezindlu zezindlu kusukela ku-2008. Kithina, lokhu akubanga nje kuphela umsebenzi, kodwa yingxenye ebalulekile yokuphila. Okuhlangenwe nakho kwethu nolwazi oluphakeme lwazi lunikeze ithuba lokuba omunye wama-studio odumile kakhulu futhi aphezulu kunazo zonke zokuklama e-Romania. Imiklamo ngayinye yokuklama yangaphakathi iyingqayizivele futhi iyingqayizivele ihlolisisa izakhiwo zangaphandle nezangaphakathi zendlu kanye nezidingo zamakhasimende. Kuze kube manje, sifeze ngempumelelo amaphrojekthi we-150 design yangaphakathi yezindlu zakudala nge-attic, izindlu zendawo zakamuva nezakhiwo ze-100 esivele sinikeze inkonzo yokuphatha ngokuletha izinto zokwakha ngaphakathi. Ithimba lethu bangasebenzisa zonke izinto kungenzeka futhi ubuchwepheshe, zonke izitayela design kusukela classical, baraque, entsha classical ukuze Mediterranean yesimanje noma zaseScandinavia ukwenza komuntu siqu ikhaya yokuphila. Uma uhlela ukuthenga i ingaphakathi design iphrojekthi, iphothifoliyo samanje imisebenzi eyenziwe inkampani yethu ezingasetshenziswa ukukusiza ukunquma titayela kakhulu endlini yakho noma efulethini. Classic izindlu kanokusho izindlu yokugcina phansi isitayela Mediterranean Villas yesimanje, sisebenza zonke izinhlobo izakhiwo ezweni lonke, kuhlanganise Bucharest, Giurgiu, Brasov, Ploiesti, Constanta, Braila, Tulcea futhi Galati.
Iphothifoliyo yezindlu zangaphakathi zakha izindlu zanamuhla - Izakhiwo zangaphakathi zase-villas zaseBucharest - I-Nobili Ingaphakathi Yomklamo